သမာဓိတရား ၊ သီလ နှင့် အသိ-သတ္တိ ရှိခြင်း | တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း
Submitted by Aung San U on Sat, 08/01/2020 - 13:20
သမာဓိတရား ၊ သီလ နှင့် အသိ-သတ္တိ ရှိခြင်း .pdf
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရစနစ်များ ပေါ်ပေါက် လာပြီး စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုခေတ်မှ အစပြုပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အရပ် သား / စစ်တပ်၏အာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်မှု / ဒီမိုကရေစီနှင့် လိုက်ဖက်သည့် ရောနှောသည့် ခေတ်တွင် ပြည်သူများအနေဖြင့် မည်သူသည်မျိုးချစ်များဖြစ်ပြီး၊ မည်သူက သစ္စာဖောက်သူများ ဖြစ်ကြောင်းကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြ ထားသော ဆောင်းပါးတိုသည် သမာဓိတရား ရှိသူများနှင့် သမာဓိတရား မရှိသူများကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် အတွက် ရှင်းလင်းစွာရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာဆင်းရဲသော အစိုးရအောက်တွင် တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာ သည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၁၀)တန်းအောင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရပြီးသူများ၏ အလုပ်လက်မဲ့ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အတော်မြင့်မားလှသည်။ ပညာရေးအတွက် အသုံးပြု ခဲ့ရသော ငွေကြေးနှင့် အချိန်ကာလ များသည် ကျောင်းသားများအတွက် မည်သည့် တန်ဖိုးတစ်စုံတစ်ရာ ထပ်ဆောင်းတိုးမြှင့်လာခြင်း မရှိသည့်သဘောဖြစ် နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည် ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားပြီး အလွယ်တကူပင် တင်ယူ တက်မြောက် နှိင်စွမ်းရှိကြသည့်အပြင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်တွန့်ဆုတ်ကြသူ များမဟုတ်ချေ။ သန်းနှင့်ချီပြီး ပင်ကိုအရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော မြန်မာနှိင်ငံ သားတို့သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ထိုနိုင်ငံများက ၎င်းတို့ကို ကောင်းစွာအသုံးချနေကြသည်။ အလားတူပင် မြောက်များစွာသော ပညာရှင်နှင့်ပညာတတ်တို့သည်လည်း တိုးတက်သောနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ ပြောင်းသွားပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်များတွင် ဆရာဝန်ကြီးများ၊ အင်ဂျင်နီယာ ကြီးများအဖြစ် အောင်မြင်နေကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲက လူတော်များများမှာ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်လာကြခြင်း ရှိကြမည်မဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှတွင် အလွန်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာ မိမိတို့ငယ်စဥ်ကာလတွင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ရသည်ကို အမြဲတစေအလွန်ပင် ဂုဏ်ယူခဲ့ ကြပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာလည်း အာရှမှာအကောင်းဆုံးဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ ကြရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံ‌ရေးလောကမှ အပြီးပျောက်သွားသင့်သည့်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မသင့်လျှော်သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေး သြဇာလွှမ်းမိုး ထားသူများ အားလုံးကို မြန်မြန်ဖယ်ထုတ်နိုင်မှသာလျှင် တိုင်းပြည် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာ လိမ့်မည်။ ထိုတို့သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက လည်း ၎င်းတို့၏အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို အလွယ်တကူစွန့်လွှတ်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ မြောက်များလှစွာ သော ငပိန်းများ (လှည့်ဖျားရလွယ်သူများ)၊ ငတုံးများ (ထူတူတူအတတများ) ၊ ငကြောင်များ နှင့် ငယောင်များကို အသုံးချ၍ နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ခြင်း၊ နှိင်ငံရေး လှည့်ကွက်များဖြင့် တိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေခြင်းပြုလုပ်ပြီး အမျှော်အမြင်နှင့် ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးနည်းပါးသော အစိုးရသည်လည်း မလိုအပ် သောနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်များကို ဖယ်ရှားရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အပြင် အစီုးရ သစ်မှ တင်မြှောက်ထားသော ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်အချို့သည်လည်း ငကြောင်၊ ငယောင်များ၏ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မူ နောက်လိုက်ပါသွားပြီး စိတ်ဓါက်နိမ့်ကျ နေသူတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူနိုင်ချေ။
၎င်းတို့ကဲ့သို့သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမူမမှန် (Personality Disorders) ရောဂါရှိသောသူ များသည် သိသာထင်ရှားလှသည့်ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာ သိုမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿ နာများ ရှိတက်ကြသည်။ ၎င်းတို့အတွက် သင့်လျှော်သောဆေးဝါးနှင့် ဆရာဝန် များ၏ ကုသမူများခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပညာရေးအရသော် လည်းကောင်း၊ လူမူရေး အရသော် လည်းကောင်း ကြီးကြီးမားမား အောင်မြှင်မူ မရှိခဲ့ချေ။ မှန်းစလို့ မလွယ်သော စိတ်မမှန်ရောဂါ (Borderline personality disorders) စွဲနေသူများကို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ရန် မလွယ်ကူလှပါ။ ၎င်းတို့သည် လိမ်ညာ၊ ကောက်ကျစ်၊လှည့်ဖျား (Lie, Cheat and Deceive (LCD)) တတ်သည့်နေရာများတွင် အထူးဝါသနာရှိလှသည့် အကျင့်စရိုက် မကောင်းသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း တို့ထဲက အချို့သည် ၎င်းတို့၏ စစ်မှန်သော စရိုက်ကို ဖုံးကွယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အရင်းနှီးဆုံး သူများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဘာသာတရား နောက်ကွယ်တွင် ပုန်းရှောင် နေကြသည်။ ၎င်းတို့သည် တာဝန်ယူစိတ်လည်း မရှိကြသောကြေင့် ရေရှည်တွင် ၎င်းတို့နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်နွယ်သူများသည် ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရကြလိမ့်မည် (စိတ်ပညာရှင် နှင့် စာရေးဆရာ M. Scott Peck MD က ဤအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြ ထားပြီး အင်တာနတ်တွင်ရှာဖွေဖက်ရှုနှိင်ပါသည်) ။ လိမ်ညာ၊ ကောက်ကျစ်၊ လှည့်ဖျား (Lie, Cheat and Deceive (LCD)) သည် လူတော်တစ် ယောက်ဖြစ်နှိင်ပေမဲ့လည်း ၎င်းသည် ကိုယ်ကျင့် တရားမရှိသောသူတစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။ အကျင်စာရိတ္တ ချို့ယွင်းသူတစ်ဦးသည် လူ့အတိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုတွင် အောင်မြင်လာသောအခါ ၎င်း၏မိသားစုမှလွဲ၍ အခြားသူများကို သိသိသာသာ ဒုက္ခပေးတက်ကြသည်။ အချို့မှာ၎င်းတို့၏ စိတ်ဓါက်အားနည်းချက်များ ဖုံးကွယ်ကာ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်(၅၀)နှင့်နှိင်းယှဥ်ပါက ယခုခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ယဥ်ကျေးမူ များသည် အလွန်လျှင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ပြောင်းလဲမူ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြသည်။ လူအများ အနေဖြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ တိုးတက်မူအကြောင်းကိုသာ အဓိကတွေးခေါ် စဥ်းစားနေကြသည်။ တကယ်တမ်းအားဖြင့် ယဥ်ကျေးမူပြောင်းလဲမူများ၏ အဓိက သော့ချက်မှာ စိတ်ဓါတ်ရေးရာနှင့် လူ့အခွင့်အ‌‌ရေးဆိုင်ရာ တရားမျှသမူရှုဒေါင့် အမြင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူ့အဖွဲ့ အစည်းများတွင်ပင် အမျိုးသမီး များအပေါ် ခွဲခြားအနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံမူ့ဆိုင်ရာကိစ္စတို့ ရှိနေပါသေး သည်။ ယင်းကိစ္စ များသည် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မူနှင့်မသက် ဆိုင်ပါ။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် များသောအားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်ပြီး ဘာသာရေး ရှုထောင့် အမြင်များတွင်လည်း မကြာခဏပါ ၀င်လေ့ရှိသည်။ “Spirituality is timeless, era-less, above religions, and is what is truly good for humanity and planet Earth”. သို့သော် လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာ သော အသက်များစတေး ခဲ့ရသည့် (ဟိန္ဒူ၊ မွတ်စလင်များ၊ ခရစ်ယာန်များ၊ ကွန်မြူနစ်များ၊ အရင်းရှင်များ၊ အင်ပါယာများစသည်တို့) ဘာသာရေးနှင့်အတွေး အခေါ်ဆိုင်ရာ ပရိပက္ခများ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်(၂၀)ခန့်က စာမျက်နှာ ၂၅၀ ခန့်ရှိသော “တိုးတက်၍ လူသားဆန်သော လူ့အဖွဲ့စည်းနှင့် လက်တွေ့ကျ သော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မူ” (Pragmatic Spirituality foraProgressive and Humane Society) ‌ဆိုသည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးခဲ့ဖူးသည်။ အဆိုပါစာအုပ်သည် တိုးတက်သည့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဥ် အတွက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ယဥ်ကျေးမူ ပြဌာန်းချက်ကို တတိယနိုင်ငံ(third world) များ၏ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မူများ ပူးပေါင်းတည်ဆောက် ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်း ပါဝင်ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်မှကောက် နှုတ်ချက်များ ကို ဆောင်းပါး၏တတိယပိုင်း “တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး၏ရပိုင်ခွင့် အားလုံးပြန်ရရှိရေး” (Enfranchising the Nation of Myanmar) တွင် အသုံးပြုသွား မည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု(Culture Disorders)ကို ရိုက်ခတ်သော အချက်များထဲတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်အရပ်ဘက်လူ့အခွင့်အရေးသည် အဓိကပင်ဖြစ် သည်။ မြန်မာဘုရင်များ အုပ်ချုပ်စဥ်ကာလကပင် ပြည်သူလူထုတွင် နိုင်ငံရေးဆိုင် ရာတောင်းဆိုပိုင်ခွင့် လုံးဝမရှိမူနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးများမှာ လည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်သို့ ရောက်ရှိ ချိန်ကာလတွင် ပြည်သူလူထုအတွက် အခွင့်အ‌ရေးများပေးအပ်သော ဥပဒေ ရေးရာစနစ်တစ်ခုရှိခဲ့သော်လည်း အဆိုပါအခွင့်အရေးများမှာ အုပ်ချုပ်သူ ဗြိတိသျှ တို့က‌စီစစ်ရွေးချယ်ပြီး ခွင့်ပြုခဲ့သောအခွင့်အ‌ရေးမျိုးသာဖြစ်သည်။ သူ့အချိန် သူ့အခါတွင် ထိုဥပဒေရေးရာစနစ်သည် အရပ်ဘက် တရားမျှသမူနှင့် စပ်လျဥ်း၍ မြင့်မားသော အဆင့်အတန်း တစ်ရပ်ရှိခဲ့ပေသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် အာဏာရှင် စနစ်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းစနစ်ကို အများ ပြည်သူများက ဆန့်ကျင်ခဲ့သောကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောဗမာလူထု အကျင်းချခံခဲ့ ရသည်။ အဆိုပါ အာဏာရှင် စနစ်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအမည်ခံအစိုးရဖြင့် (တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း ဖြစ်သူ) ဦးသိန်းစိန် တစ်ယောက် သမ္မတ ဖြစ်လာချိန်အထိ သက်ဆိုးရှည်ခဲ့သည်။ ၎င်း တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ ယခင်ခေတ်အဆက်ဆက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် တရားသူကြီးများ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် တရားမဝင် လုပ်ရပ်များကို (ယဉ်ကျေးမှုစံချိန် စံညွှန်းများအရ)အရေးယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ၏ကျူးလွန်ခဲ့သော မည်သည့်တရားမဝင် လုပ်ရပ်များမဆို (မှန်ကန်သောအရေးယူ ခြင်းမရှိပဲ) နောက်အစိုးရများမှ အရေးမယူ၍ ကာကွယ်ပေးကြသည်။ လက်ရှိ အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့သောတရားမဝင်လုပ်ရပ်များကို ကာကွယ်ပေးရန် တစ်ခု တည်းသောနည်းလမ်းမှာ ရသောနည်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ရွေးကောက်တင် မြှောက်ပြီး အကျင့်ပျက်တရားသူကြီး များ၏ အကူညီဖြင့် ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှေးဗမာ ဘုရင်များ၏လက်ထပ်တွင်ပင် ဤသို့သော တရားမျှတမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြာမှု (Culture Disorders) များနှင့်သက်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်များ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လက်ရှိပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြာမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် မည်သည့် နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုများမဆို တွန်း လှန်လိုသောသောစိတ်ကို လျင်မြန်စွာမွေးထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု (Culture Disorders) သည် လူမူ့အတိုင်း အဝိုင်းနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုထဲတွင်ဖြစ်စေ ရှိကြသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် အသံချဲစက် ၂၄ နာရီ ကျယ်လောင်စွာ ဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဆူညံမူများဖြစ်စေခြင်း)
ဒီမိုကရေစီအမည်ခံထားသော အစိုးရအုပ်ချုပ်မူပုံစံသည် အကူးအပြောင်းကာလတွင် ခေတ္တခဏ သာဖြစ်သင့်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရှိနေစေကာမူ ပိုမိုပြည့်စုံသောဒီမိုကရေစီပုံစံသို့ လျှင်မြန်စွာ‌ရွေ့လျားရာတွင် ဟန့်တားမူမရှိစေရန်အတွက် အမြင့်ဆုံးသောစံချိန် စံညွန်းရှိသင့် လှသည်။ တရားဥပဒေရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ စီရင်ဆုံးဖျက်သူတိုက အလွန်ဖြောင့်မတ်စွာ လေ့ကျင့်ဆောက်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဤစာစု သို့မဟုတ် အလားတူဆောင်းပါးမျိုးက ဆောင်ကြဥ်း ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သမာသမတ်မကျသော တရားသူကြီးများ အပါအဝင် ဥပဒေမဲ့လှသည့် သူများ၊ မိမိကိုယ်ကို ဥပဒေ၏အထက်တွင်ရှိသည်ဟု ယူမှတ်သူ များအတွက် အပြစ်ဒဏ်ပေးခံ ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းမျိုး ပပျောက်မှသာ ၎င်းတို့ ဖန်တီးခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု (Culture Disorders)ကို ပျောက်ကွယ် သွားမည် ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု (Culture Disorders)‌ရောဂါတစ်ခုမှာ “ငါနိုင်ရင် မင်းရှုံးရမယ်” "(I) WIN-(You) LOSE" ဆိုသည့် သဘောထား ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အနှိင်ရရှိသူအတွက်ကတော့ အလွန်ပင်ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့် မည်။ အနိုင်ရရှိသူအတွက် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရလိုက်သော်လည်း ကျန်သူများအတွက် မှာ သုညသက်သက်သာဖြစ် သည်။ဤကဲ့သို့သော သဘောထားမျိုးအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့၏ မြန်မာဘာသာစကား သင်တန်း၌ ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ်မှားယွင်စွာ သင်ကြားခဲ့သည်။ အမတ်ကြီးအနန္တသူရိယ၏ အမျက်ဖြေလင်္ကာပါ ဆိုလိုချက် များကိုအလွတ်ကျက်မှတ်၍ မှားယွင်းစွာသင်ယူခဲ့ကြရသည်။ လက်တွေ့ ကမ္ဘာ့ လောကတွင် အနိုင်-အရှုံးရွေးချယ်မူသည် အပျက်သဘောဆောင်သော လှည့်စားမူ့ တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်အတွက် မှန်ကန်သည့် ရွေးချယ်မူမျိုးမဟုတ်ချေ။ အဆိုပါ သဘောထား၏ နောက်ဆက်တွဲမှာ အမှန်တကယ် အနိုင်ရသူ မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးသည် ရှုံးနိမ့်မူများသာရပြီး မည်သူမျှမနိုင်ပဲ နှစ်ဘက်စလုံးအရှုံးသာရင်ဆိုင်ရပြီး LOSE-LOSE Situation သာဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အနိုင်ရရှိမူ (WIN-WIN)ကို စဥ်းစားတွေးခေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ စွမ်းအားပင်ဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းအားမဲ့အဖွဲ့အစည်း၏ အတိုင်း အတာနှင့် အရွယ်အစားသည် အလွန်ပင်အကန့်အသက်ရှိပြီး ဤစွမ်းအားမျိုးရှိသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ယှဥ်ပြိုင်လို့မရနှိင်ပါ။ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ပျောက်ကွယ် ကုန်သော ယဥ်ကျေးမူများရှိသကဲ့သို့ အချင်းချင်းနှင့် အိမ်နီချင်းမျိုးနွယ်စုများအကြား အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ကြောင့် နိမ့်ပါးပျောက်ကွယ် သွားသောယဥ်ကျေးမူများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ် ကြီး လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုရင့်ကျက်ထက်မြက်လာကြဖို့ မျှော်လင့်ထားပါသည်။ အသိ ပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများလာသည်နှင့်အမျှ စိန်ခေါ်မူရှိသောစီမံကိန်းများသာ မက လူပေါင်းမျိုးစုံနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်စေမည့် မှန်ကန်သောဖြေရှင်း နည်းများရှာဖွေရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြ မည်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော ဖြစ်ရပ်မှန်များကို နားလည် သဘောပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်တော်တို့၏ လိုက်လျောညီထွေမူများလည်းတိုးတက်လာပြီး လက်တွေ့မကျပဲ အပိုသက်သက် ဖြစ်နေသော အလုပ်မျာကိုရှောင်ရှားပြီး မှန်ကန်သောအခွင့်အ‌ရေးများ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူများဖြစ်လာစေရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေတွေ့ရှိနှိင်မည် ဖြစ် သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း (Value added work) နှင့် အကျိုးမဲ့ အလုပ်များအကြား တွင်ခွဲခြားသိမြင်ပြီး သတိမူလုပ်ကိုင်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိရေး WIN-WIN အတွေးအခေါ်စိတ်နေသဘောထားသည် တန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ပိုမိုကြီးမားကောင်းမွန် သောအကျိုးရလဒ်များ “Pies” များထွက်ပေါ် စေနှိင်သည်။ အကျိုးရလဒ်များ ခွဲဝေရာတွင်လည်း မျှသလွယ်ကူစေသည်။
ရပ်ရွာနှင့်မိသားစုအဆင့်တွင်လည်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု (Culture Disorders) များရှိကြသည်။ ၎င်းသည် လူမျိုးစုများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဖြစ်နိုင်သော် လည်း ဤနေရာတွင်မဆွေးနွေတော့ပါ။ သို့သော် အပိုင်း ၃ တွင်ဖော်ပြမည့် “Think Tank” အုပ်စုအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါလိမ့်သည်။
လူတစ်ယောက်သည် မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုသည်ကို သိရှိပြီးလျှင် ၎င်း၏လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြစ်ရပ်မှန်များကို အပြည့်အဝနားလည်လာပြီး၊ ၎င်းသည် မိမိ ကိုယ်ကိုနှင့်၎င်း၏ အတိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်စေရန်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်မူ များပြုခဲ့သည့် အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် (ဦးတည်ချက်) aims and objectives (direction) များကို အတော်အတန်ရှင်းလင်းစွာ နားလည် သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များ နှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုရှိအောင် မိမိကိုယ် ကို အစဉ်တစိုက်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် ကနဦး ပိုင်းတွင် အခြေအနေများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန် ၎င်းတို့ထံ၌ လုံလောက်သောဗဟုသုတ၊ ရင့်ကျက်မှုသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များ မရှိသေးသော ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကနဦးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့် လွှဲချော်သွားနိုင်ချေ ရှိနှိင် သည်။ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အမှားများကျူးလွန်မိနိုင်ပြီး ရံဖန်ရံခါ သိုမဟုတ် အကြိမ်ကြိမ် လဲကျ(ကျရှုံး)နိုင်ပြီး အဲဒီအမှားတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းအနေဖြင့် နောက်တဖန်ပြန်ထလာ နှိင်ပြီး ခေတ္တခဏကျရှုံးမူကို လက်ခံပြီး ရာသက်ပန်အရှုံးမပေးလိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါ သည်။ အကယ်၍ ‌ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမည့် လမ်းများ ပိတ်ဆို့ခံရ နေပါကလည်း ပိုမိုမြင့်မားသော အောင်မြင်များမူအတွက် နောက်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြား ရွေးချယ်စရာများကို ထပ်မံရှာဖွေ ရမည်ဖြစ်သည်။ အကျိုး အကြောင်း စီလျော်မူနှင့် ညှိ့နှိုင်းလုပ်ကိုင်နှိင်စွမ်းရှိသော စရိုက်လက္ခဏာမျိုး ပိုင်ဆိုင်သောလူတစ်ယောက် သည်သာ သမာဓိတရားကိုရနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ယုံကြည် ချက်အပေါ်အာရုံ စူးစိုက်မူသည် ၎င်း၏လုပ်ရပ်များနှင့် လိုက်ဖက်ညီ နေမည်ဖြစ်ပြီး သာမန်ထက် ပိုမိုသည့် အကျင့်ထူးကို ကျင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - ရည်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင် aims and objectives များမရှိပါက အာရုံစူးစိုက်ရန်မလို၊ ထို့ကြောင့် မည်သည့်တိကျသော သမာဓိ (ရည်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင် aims and objectives များ၏လုပ်ဆောင်ချက်) မလိုအပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် aims and objectives ကင်းမဲ့သူများသည် သမာဓိတရားရှိခြင်း ကိုမ လိုလားကြပါ။ အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာသည် တစ်နည်းနည်းအားဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်လာပေမဲ့ ၎င်းတို့သည် သာမန်ထက်ပိုမို ကြိုးစား အားထုတ်ရန် အမြဲတစေ လိုအပ်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့ သည် မည်သို့ပင် လိမ်ညာဖုံးကွယ်နေပါစေ ကျရှုံးခြင်းနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာရရန် ရည်ရွယ်ပြီး အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ထားသော အားက စားသမားများနှင့် လေ့ကျင့်မူလုံးဝမရှိပဲ အောက်ခြေမှစတင်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရမည့် သာမန်လူတစ်ဦး၏ဥပမာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ၎င်းအနေနှင့် ညှစ်ပက်သောနည်း လမ်း၊ မတရားသောနည်းလမ်း တစ်မျိုးမျိုးသုံးမှသာလျှင် ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ရနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သမာဓိတရားကို လက်ကိုင်မထားနိုင်သောသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ စရိုက်လက္ခဏာများလည်း ပျက်ယွင်းနေပြီး အများနှင့်ယျဥ်ပြိုင်သည့်အခါ မျိုးတွင် လိမ်ညာ၊ကောက်ကျစ်၊လှည့်ဖျား Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ခြင်း ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှုပ်ထွေးမှု‌ရောဂါ Character Disordered ဖြစ်နေသူများသည် သမာဓိတရားရှိသူများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ကြပြီး ယျေဘုယျအားဖြင်း ၎င်းတို့သည် Lie ,Cheat and Deceive (LCD) များဖြစ်ကြသည်။
သမာဓိတရားကို တိုးတက်မှုရှိသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံများအတွင်း၌ အင်အားကြီးမားသောအပြုသဘောဆောင်သည့် စွမ်းအားတစ်ခုအဖြစ် နားလည် သဘောပေါက်ထားကြပြီး အသက်ဝင်နေသည့် စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ် ကျယ်ပြန့် ပြီး ကမ္ဘာကြီး၏သဘာဝတရားကြီးကိုလည်း အပြုသဘောဖြင့် တုံ့ပြန်နေသည် မဟုတ်လော။ ယင်းမှာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော ဆင့်ကဲဖြစ်စဥ်လမ်းကြောင်းမှ မှန်ကန်သော ယုံကြည်မူဆိုင်ရာ အပြုသဘောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သမာဓိတရား ရှိနေမည်ဆိုပါက ၎င်းအတွက် ဖျက်လို ဖျက်စီးလိုသည့် စိတ်ဓါတ်လည်း နည်းပါးလာမည် ဖြစ်သည်။ သမာဓိ တရားသည် ကမ္ဘာမြေကြီးကို တည်ကြည်မူ၊ နိုးကြားမူ နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိတို့ဖြင့် မောင်းနှင့် နေသည့် အရှိတရားလည်းဖြစ်သည်။ သမာဓိတရားသည် မူအရ လက်တွေ့ကျ လှပြီး စိတ်ကူးယဥ်ဆန်ခြင်းမရှိပဲ အထွဋ်အမြတ်ထားလျှက် မြတ်နိုးအပ်သည့် အရာလည်းဖြစ်သည်။ သမာဓိတရား ခေါင်းပါးသောသူများသည် ရိုးရှင်းသော အလုပ်ကို စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကာ ၎င်းတို့ သည် လုံလောက်သင့်လျော်သော သမာဓိတရား ချို့ငဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သင့်တော်သော သီလ နှင့် အသိ-သတိတရားကို တိကျစွာစွဲကိုင်ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် သမာဓိ တရား၏စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်ကို လူအတော်များများက အတိအလင်း နားလည်သဘော ပေါက်ခြင်း မရှိပေ။
သီလဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ငါးပါးသီလသာမက၊ ခရိယာန်ဘာသာဝင်တွင် ပညတ် တော်တရား ၁၀ ပါးတို့ကဲ့သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဖွယ် စည်းမျဥ်းများကို ဆိုလိုပြီး၊ များသောအားဖြင့် ၎င်းသည် "သင်သည်မလုပ်ရ" "thou shall not" ပညတ်များနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ကျင့်တရားသာ ခံယူသောလူများ အနေဖြင့် သင်“ဖြစ်ရမည်” “thou shall” ကိုပါကျင့်သုံး နှိင်ခွင့်ရှိပြီး ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် အလွန် အရေးကြီးသောစာမေးပွဲအတွက် စာသင်ကြားသောကျောင်းသားတစ်ဦးသည် တစ်ရက် လျှင် အနည်းဆုံးရှစ်နာရီ “စာကိုလေ့လာကျက်မှတ်ရမည်” “thou shall” ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာအောင် “နေရမည်” “thou shall” ဖြစ်သည်။ ယခုစဥ်းစားနှိင်သည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန် သော အတွေးအခေါ် စဥ်းစားနိုင်ရမည်ဟူသော “thou shall”။ နောက်ထပ် ဥပမာ တစ်ခုကတော့ ချန်ပီယံဆုအတွက် ရည်မှန်း လေ့ကျင့်နေသည့် အားကစားသမား တစ်‌ယောက် လိုက်နာရသည်မှာ၊ အားကစားတားမြစ် ဆေးဝါးများ "thou shall not" “အသုံးမပြုရ” ။ သီလဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မူ ဆိုင်ရာမသက်ဆိုင်ဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် LCD ( Lie ,Cheat and Deceive) ဖြစ်အောင် “မနေထိုင်ရ” "thou shall not"။ သမာဓိတရား၏ အမြင့်ဆုံးသောအမိန့်သည် သီလတရားကို အမြင့်မားဆုံး နားလည်သိမြင်ခြင်း နှင့် ကိုက်ညီအောင် နေထိုင်သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှုပ်ထွေးမှု‌ရောဂါ Character Disordered ဖြစ်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ သည် သာမန်အားဖြင့် အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားသိမြင်တတ်ပြီး များသောအားဖြင့် အပြစ် ပေးခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက သူတို့၏လုပ်ရပ်များကို အမှန် တရားဟု ယူဆလာရန်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်းဝိုင်းဝန်းပြီး ယုံကြည်ဟန်ဆောင်ကြသည်။ ကိုယ်ကျင့် တရားအကြောင်း ဟောပြောဆုံးမခြင်း များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ထိရောက်သောအပြစ်ပေး အရေးယူမူသာလျှင် ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်တွေ တားဆီးရပ်တန်းစေနိုင် သည်။
သမာဓိတရားအတွက် အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အသိ-သတိရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြဲမြံစွာ သတိရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အသိ-သတိရှိခြင်းသည် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် ကိုမဆို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ရန် လမ်းပြပေးနှိင်သည်။ စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေ များကို အမှားအယွင်းမရှိ ထိထိရောက်ရောက်၊ နိုင်နိုင်နင်းနင်း၊ သင့်တင့်လျောက် ပတ်စွာ အမြန်ဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အစီအစဉ်လိုအပ်သည်။ သီလစောင့် ထိန်းခြင်းအားဖြင့် သတိရှိစွာ အမှားကင်းနိုင်သမျှ ကင်းကင်းဖြင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလွန်ပင်အရေးကြီးလှသည်။ အလုပ်တစ်ခုကို သင့်လျော်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု (သို့) အရေးယူမှုကင်းမဲ့နေစဥ်၏အခြေအနေကို သတိပြုမိခြင်း သည် သာမန် သတိနှင့်သာတူညီသည်။ MINDFULNESS အသိ-သတိရှိခြင်း ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ mistake free, error free, fault free အမှားကင်းခြင်း တို့ပါဝင်သည့်ရှုထောင့်ကို မကြာသေးခင်မှ ကျွန်ုပ်အပြည့်အဝ နားလည်လာခဲ့ သည်။ အထူးသဖြင့် အလွန်အရေးကြီးသော နည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်၍ MINDFULNESS အသိ-သတိရှိခြင်းသည် သမာဓိတရား SAMADHI ၏ အမြင့်ဆုံး အဆင့် ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သည့်ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်သည် ယာဉ်တစ်စီးကိုမောင်းနှင်နေစဥ် ယာဉ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေပေါ်အစဥ်မပြတ် အာရုံစူးစိုက်ရပြီး ဘတ်စ်ကားဖြစ်စေ၊ အိမ်စီးကား ဖြစ်စေ၊ နှင်းများကျနေစဥ်ဖြစ်စေ၊ သဲကန္တာရထဲဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးတည်း မောင်းနှင်းနေစဥ် ဖြစ်စေ၊ အခြားသူများလိုက်ပါနေစဥ်ဖြစ်စေ သတိရှိစွာ မောင်း နှင်းရသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ကားမောင်းနေစဉ် စတီယာရင် နှင့်ဘရိတ်၏စွမ်း ဆောင်နိုင်မှုအကန့်အသတ်အတွင်း မောင်းနှင်ရန်သတိထားနေ ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် ၎င်း၏ ဘရိတ်များ၊ တာယာများ နှင့်စတီယာရင်ယန္တရားများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ကြောင်း သေချာဖို့ လိုအပ်ခြင်း၊ ယာဥ်စည်းကမ်း သဘော သဘာဝကို နားလည်ခြင်း၊ လုံလောက်သော အာမခံ ထားရှိခြင်း၊ ဘယ်အချိန်တွင် စက်နှိုးရမည်၊ ဘယ်အချိန် တွင်အရှိန်မြင့်ရမည်၊ ဘယ်အချိန်တွင် အရှိန်လျှော့ ရမည်၊ ဘယ်လိုရှောင်ရမည် ၊ ဘယ်လို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ရပ်တန့်ရမည် ဆိုသည် များကို သိရှိရသည်။ အကယ်၍ အကျွမ်းတဝင်မရှိသော နေရာအသစ်တစ်ခုသို့ မောင်းနှင်သွာသောအခါ ၎င်းအနေဖြင့် မြေပုံများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ လမ်းညွှန် စာအုပ်များ စသည်ဖြင့် အချက်လက်များစုဆောင်းရမည်။ ထို့ထက်မူကာ ၎င်းအနေဖြင့် ကားမောင်းနေစဉ် သမ္မာသတိရှိရှိ ရှိနေရပြီး ခရီးသည်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ဆယ်လူလာဖုန်းသံကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လမ်းဘေးရှုခင်း ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တချက်တလေမှ သတိလစ်ဟင်းမူမဖြစ်စေရ။ ယာဥ်နှင့် ယာဥ်ကြောအခြေအနေ ကိုသာ အာရှုံစိုက်ရမည်။ အတွေ့အကြုံများလာသည်နှင့်အမျှ အထက်ပါဖော်ပြ သော ကိစ္စရပ်များအပေါ် အပြည့်အဝ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင် စွမ်းရည်များလည်း တိုးတက် လာပြီး သမာဓိတရားနှင့်အတူ သတိရှိသော ယာဥ်မောင်းဖြစ်လာသည်။ အထက်ပါဖော်ပြချက် များတွင် ကားမောင်းနေချိန်တွင် အမှားမဖြစ်စေရန်အတွက် ရှိရမည့်သတိများကို ဥပမာအနေဖြင့် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အငြိမ်းစာမယူမီ၊ အမေရိကန်နှိင်ငံကာကွယ်ရေးဌာန၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အာကာသနှင့်နျူကလီးယားနည်းပညာများ အတွက် အသုံးချနှိင်ရန်လေ့ကျင့်ပေးသော စွမ်းရည်ဆိုင်ရာရင့်ကျက်မူပုံစံ CMM Capability Maturity Model (အသေးစိတ်လေ့လာရန်အတွက် web တွင်ကြည့်ပါ) သင်တန်း တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ အမေရိကန်သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ အဆိုပါ နည်းစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိင်ရန် ဒေါ်လာသန်း ထောင်နှင့်ချီ သုံးစွဲခဲ့ရ သည်။ အမှန်ကတော့ အလွန်အရေးကြီးလှသည့် လုပ်ငန်းစဥ်များ ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် ကြီးမားလှသည့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်အတူ ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံး ပြုပြီး သမာဓိတရား၏ အမြင့်ဆုံးအမိန့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အသုံးပြုနေသည့် ဤစနစ်ကို အမှားအယွင်း လုံးဝမရှိစေရေး zero error ၊ ချို့ယွင်းချက် လုံးဝ မရှိစေရေး zero defects ပင်ဖြစ်သည်။
အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်တို့သည် ကွန်ပြူတာနည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ဥရောပနိုင်ငံများထက်စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုသာလွန်လာနေပြီး စီးပွားရေးနယ်ပယ် တွင်လည်း ခိုင်မာသော စီးပွားရေးနှင့် အတူရှိလာခဲ့သည်။ လက်ရှိအခြေအနေ ‌ရောက်ရှိ ရန်အတွက်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြိုးစား ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံများသည် သမာဓိစွမ်းအား ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေ ဖြင့် အဆိုပါနိုင်ငံများ၏ နည်းပညာနှင့်ယဥ်ကျေးမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲတိုး တက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ဂရုမူသင့်ပြီး ၎င်းတို့ဘာကြောင့် တိုးတက်သည် ဆိုသော မေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေးသင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အနာဂတ်တွင် ၎င်းတို့ထံမှ အတုယူသင့် သည်ကို ယူရမည်။ ၎င်းတို့ထံမှ ဘယ်အရာကို လေ့လာသင်ယူရမည် ကိုလည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်၏ အယူအဆ သည် များစွာသောအားနည်းချက်များလည်း ရှိနေကြသည်။ သို့သော် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ မဲဆန္ဒရှင်တိုင်း အလွန်အရေးကြီးသော အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိခဲ့သည်။၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုသည် (တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ယူဆခြင်း)အစိုးရအားရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ မြန်မာပြည်သူလူထုများသည် အဓိပ္ပာယ် ပြည့်ဝ သော နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများကိုမကြောက်ရွံ့ပဲ မကောင်းသောအစိုးရများကို မဲမပေးဘဲဖယ်ထုပ်နိုင်သော ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အသိ ဥာဏ်ကိုမွေးထုတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသော အစိုးရတစ်ရပ် ရွေး ကောက်တင်မြှောက်နိုင်ခြင်း၏ နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝမှာ သမာဓိတရားရှိ သော ခေါင်းဆောင်များနှင့် လိမ်ညာ၊ ကောက်ကျစ်၊ လှည့်ဖျား Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ရှိသောခေါင်းဆောင်များ၏ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မူ အကြားမှ မှန်ကန်သောရွှေးချယ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
သိပ္ပံနည်းပညာလောကတွင် အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း Albert Einstein သည် သီအိုရီဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာရပ်အတွက် ကြီးမြတ်သည့် သမာဓိတရား ထားရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ သိပ္ပံ နည်းပညာအပေါ်သက်ရောက်မူသည် ကြီးမှားလှပြီး ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်း လှသည်။ သမာဓိတရား ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ဦးတည်းကသာ ဤသို့သော ကံကြမ္မာ မျိုးကို ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြီးမြတ်သည့် သမာဓိတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ သည်သာ ကြီးမြတ်သော ကံတရား၏ သက်ရောက်မူကို ရရှိနှိင်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိ ကိုယ်တိုင်မှလွဲ၍ မည်သူမှလည်း အဆိုပါစွမ်းအားကို လုယူနှိင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ် ပါ။
ဤဆောင်းပါးကို ဖက်ရသူအဖို့ ၎င်း၏စိတ်တွင် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံစည်းမျဥ်းနှင့် တန်ဖိုးကို တိုင်းတာနှိင်မည့် ဇယားကားချပ်တစ်ခု(သဘောတရားများ၊ တန်ဖိုးမျာ) ပုံဖော်နိုင်မည် ဟုယူဆပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိသမာဓိတရား ရှိ/မရှိနှင့် မိမိသည်မည်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိလ် ဖြစ်ပါသနည်း ဟူသောမေးခွန်းကို ဖြေဆိုနှိင် လောက်ပြီ ထင်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် အောက်တန်းကျသည့် LCD ( Lie ,Cheat and Deceive) လူအမျိုးအစားတို့ကို ဆန့်ကျင်ပါက သင့်ကိုယ်သင် ဆက်မေးရမည့်မေးခွန်းများမှာ “ကျွန်ပ်တို့သည် ဤ အောက်တန်းကျသည့် LCD ( Lie ,Cheat and Deceive) လူအမျိုးအစားတို့၏ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် လွှမ်းမိုးမူကိုခံယူမှာလား? ကျွန်တော်တို့ ၎င်းတို့ကို အရှုံးပေးလိုက်တော့မည်လော?” အကယ်၍လက်မခံနိုင်ပါက ကျွန်တော်တို့သည် အတူတကွလက်ဆွဲညီညာစွာဖြင့် ထိုအခြေနေ မဖြစ်ပေါ်အောင် အားလုံးအတူတကွ အားသွန်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ကြ ပါစို့။